ABOUT | THE MYANMAR AND BRITAIN ASSOCIATION
အဖွဲ့၀င် မိတ်ဖက်များ Partners
M.A.B.A. isanon-political, non-profit organisation with the following objectives:
မြန်မာလူမျိုးများနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားများအကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်ရင်းနှီးသောသဟဇာတဖြစ်မှု (အထူးသဖြင့်ယဉ်ကျေးမှု၊ ပညာရေးနှင့်အားကစား) ကိုမြှင့်တင်ရန်။
To promote friendship and close harmonious relationships (particularly cultural, educational and sporting) between the people of Myanmar and the people of Britain.
To promote greater understanding and awareness of Myanmar in Britain and Britain in Myanmar.
ဗြိတိန်နှင့်မြန်မာအကြားယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစား၊ ပညာရေး၊
To promote and arrange cultural, sporting, educational and other events and exchanges between Britain and Myanmar.
အကျိုးအမြတ်ရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအဖွဲ့အစည်းများအားမြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဗြိတိန်တွင်ဖြစ်ရပ်များတွင်ပါ ၀ င်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းနိုင်ငံရေးသဘောအရမဟုတ်ပါ။
To endeavour to interest organisations, charitable and otherwise, in participating in events in Myanmar and in Britain, but not ofapolitical nature.
ဒေးဗစ်သည် သူ၏လုပ်ငန်းခွင်တစ်လျှောက်လုံး ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍာ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ သူသည် လက်ရှိတွင် Perenco အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လီမိတက် နှင့် အက်ပရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လီမိတက် တို့၏ အလုပ်အမှုဆောင် မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ၊ အောက်စဖို့ ရှမွေလ Beckett ပြဇာတ်ရုံ Trust ၏ ဥက္ကဋ ဖြစ်သည်။ ဒေးဗစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပုံမှန် လည်ပတ်နေသော ဧည့်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်း တိုင်းပြည်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခရီးထွက်ခဲ့ ဖူးတယ်လို့ သိရသည်။
David spent his whole working life in the Financial Sector, principally in Investment Management. He is currentlyaNon-Executive Director of Perenco International Ltd, Asprey International Ltd.and Chairman of The Oxford Samuel Beckett Theatre Trust. David isaregular visitor to Myanmar and over the past twenty-five years has toured the country extensively.
Caroline San Kyi
ကယ်ရိုလိုင်းသည် လန်ဒန် စီးပွားရေးကျောင်းမှ စီးပွားရေးဘွဲ့ရ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူမသည် လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်တွင် နေထိုင်ပြီး သူမ၏ မိသားစု စီးပွားရေး ရွှေနှင့် ရတနာ လုပ်ငန်းတွင် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် လုပ်ကိုင် စီမံခန့်ခွဲ နေသည်။
Caroline is an Economics graduate from the London School of Economics. She is currently living in Yangon and managing her family business, which has been in the gold and jewellery industry for more than 30 years.
Cho Cho Toe (ချိုချိုတိုး)
Cho Cho သည် Cho Cho Toe & Associates ၏ တည်ထောင်သူနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု မိတ်ဖက်ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ စ၍ အများပြည်သူနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဌများအတွက် စာရင်းစစ်ခြင်းနှင့် စာရင်းစစ်ခြင်း မဟုတ်သော ၀န်ဆောင်မှုများကို ပေးသည်။ မြန်မာစာရင်းကောင်စီမှ လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (CPA) ကို ရရှိပြီးသည့်နောက်တွင် Cho Cho သည် ဗြိတိသျှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ များစွာနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းအမျိုးမျိုးတွင် အလုပ် လုပ်ခဲ့သည်။ သူမသည် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အလုပ်များမှတစ်ဆင့် မြန်မာပြည်သူများကို ကူညီရန် စိတ်အားထက်သန်သည်။ Cho Cho သည် MICPA ၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် (Myanmar Certified Public Accountant) နှင့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဘွဲ့ရများအသင်း၏ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဖြစ်သည်။
Cho Cho is the founder and managing partner of Cho Cho Toe & Associates, which has been providing auditing and non-auditing services to the public and private sectors since 1995. Since attaining Certified Public Accountant (CPA) from the Myanmar Accountancy Council, Cho Cho has interacted and worked with many different British investors, assisting withavariety of investment projects. She is also passionate about helping people in Myanmar through her various volunteer work. Cho Cho isaBoard Member of the MICPA (Myanmar Institute of Certified Public Accountant) and an Executive Committee Member of the Commerce Graduates Association.
ဂျဲနက် (Genette) သည် အောက်စ်ဖို့ဒ်တွင် ဥပဒေကိုဖတ်ရှုပြီး Heidelberg တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေသမိုင်းကို လေ့လာရန် ပညာသင်ဆုချီးမြှင့် ခြင်းခံရသည်။ သူမသည် အဆင့်မြင့် တရားရုံးတွင် စကားပြောဆိုခွင့်ရှိသည့် ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်ရန် (ဘား) ကို လေ့လာဖို့ အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်ကို ပြန်လာခဲ့ပြီ ဥရောပတိုင်း အလုပ်ဘဏ္ဍာရေးရှေ့ရပျဌာနတွင် အလုပ်လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ Genette သည် ပုဂ္ဂလိကစီမံကိန်းစတင်ရန် အစောပိုင်း အငြိမ်းစားယူသည့် ၁၉၈၉ ခုနှစ်အထိ အစိုးရ၏တရားဝင် ၀န်ဆောင်မှုတွင် ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပြီး၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကလေးစာအုပ်များကို မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ Genette သည် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရှိ ကျန်းမာရေးနှင့် ပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်သော Health & Hope ကိုလည်း အထောက်အကူပြုသည်။
Genette read law at Oxford and was awardedascholarship to study legal history at Heidelberg University. She returned to Oxford to study for the Bar and was accepted by the Treasury Solicitor’s Department to work in the European Division. Genette remained in the government legal service until 1989, when she took early retirement to start the private project, Givebooks International, transmitting thousands of children’s books to developing countries, including Myanmar. Genette also helped to underpin the major health initiative in western Myanmar, Health & Hope.
Suren သည် ABE Myanmar ရဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Academic Business Development ပိုင်းမှာ ၁၅ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ ့ပညာရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ Masters of Science (Hybrid of MBA & IT) ဘွဲ့ကို Staffordshire University မှရရှိထားသူဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိမှာတော့ သူရဲ့ ၇နှစ်တာ Academin Business Developer အတွေ့အကြုံကို အခြေခံပြီး မတူညီတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ Business အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးကို ဖွံဲ့ ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Suren, Director of ABE Myanmar, is an academic business development professional with fifteen years of experience, have set up & serve for private higher education in Asian countries, and holdaMasters of Science (Hybrid of MBA & IT) from Staffordshire University. His experience as an academic business developer includes seven years of developing five different business institutes in three different countries.
ရောဘတ် (Robert) သည် လန်ဒန်တက္ကသိုလ် SOAS တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး ဘာကင်ဟမ်တက္ကသိုလ်တွင် ဒုတိယအဓိပတိအဖြစ် အမှုဆောင်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စာအုပ် ၁၅ အုပ် ရေးသားသူ သို့မဟုတ် အယ်ဒီတာ ဖြစ်ပြီ, သူ့နောက်ဆုံး ထုတ်ဝေခဲ့သော စာအုပ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း (နိုင်ငံရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ) ဖြစ်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များက သူသည်အရှေ့တောင်အာရှ လေ့လာရေးဌာန၌ အကြီးတန်းသုတေသနအဖွဲ့ ၀င်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏လေ့လာမှုတွင် အနှစ် ၅၀ ကျော်ပါဝင်ခဲ့သည်။
Robert taught at SOAS, University of London and served as Vice-Chancellor of the University of Buckingham. The author or editor of 15 books on Myanmar, his latest publication was GENERAL NE WIN: A POLITICAL BIOGRAPHY. In recent years he has beenaSenior Research Fellow at the Institute of Southeast Asian Studies. He has been involved in the study of Myanmar for over 50 years.
မာ့ခ်သည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အဓိက အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာရှပစိဖိတ် အတွက် စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် အကြံပေးအဖွဲ့ အခန်းကဏ္ဍ များရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွင် ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် ပင်လယ်ကွေ့ နိုင်ငံများရှိ Guinness Peat ကို ကိုယ်စားပြုခြင်း၊ တိုကျိုရှိ Nissho Iwai ကော်ပိုရေးရှင်းကို အကြံပေးခြင်းနှင့် ဟောင်ကောင်ရှိ International SOS နှင့် တိုင်ပင်ခြင်း တို့ပါဝင်ခဲ့သည်။ မာ့ခ်သည် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိန်မှ ကုန်းလမ်းခရီးဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်ခဲ့သည်။ သူသည် SPA Consultancy Division ကို တည်ထောင်ရန် ၁၉၉၆ တွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Group Sales and Marketing ၏ ဒါရိုက်တာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မာ့ခ်သည် Yoma Strategic Holdings, FMI နှင့် SPA ကုမ္ပဏီ အုပ်စုများအတွက် သံအမတ်ကြီး ဖြစ်သည်။ သူသည် Pandaw Investment Holdings ၏ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ လည်းဖြစ်သည်။
Mark has had management and advisory roles, primarily in the Middle East and Asia Pacific, since 1971. They have included representing Guinness Peat in Saudi Arabia and the Gulf States, advising Nissho Iwai Corporation in Tokyo and consulting with International SOS in Hong Kong. Mark first visited Myanmar in 1964 on an overland road trip from the UK. He moved there in 1996 to set up the SPA Consultancy Division, subsequently becoming Director of Group Sales and Marketing. Mark is currently Group Ambassador for Yoma Strategic Holdings, FMI and SPA. He is also Managing Director of Pandaw Investment Holdings.
Suki သည် Myanmar Hotels International ၏ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာနှင့် GCP ဧည့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အုပ်ချုပ်ရေး ၊ Strand ဟိုတယ်၊ Inya Lake ဟိုတယ်၊ ဟိုတယ် G ရန်ကုန် နှင့် ဇိမ်ခံသင်္ဘော Strand Cruise များနှင့် အတူ များစွာသော ဧည့်၀န်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာတို့နှင့် အိမ်ခြံမြေနှင့် ဆက်စပ်သော စီမံကိန်းများကို စီမံခန့်ခွဲသည်။ ဆူကီသည် ယခင်က GHM, Intercontinental, Marriott, Scandic Hotels, New World, Renaissance နှင့် Dusit International တို့နှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဒေလီ တက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးနှင့် သြစတြီးယား၊ ဗီယင်နာရှိ ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှု၌ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဆူကီသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သည်။
Suki is Managing Director of Myanmar Hotels International and Vice President Operations for GCP Hospitality, managing the Strand Hotel, Inya Lake Hotel, Hotel G Yangon and the luxury cruise ship Strand Cruise, along with various hospitality and real estate related projects. Suki has previously worked with GHM, Intercontinental, Marriott, Scandic Hotels, New World, Renaissance and Dusit International, after graduating in Economics from the University of Delhi and in Hotel Management from Vienna, Austria. Suki has lived in Myanmar since 1991.
အိုင်ဗင်သည် Pun + Projects ကိုတည်ထောင်သူ ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တွင် ဆန်းသစ်သော လူနေမှုပုံစံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများအတွက် အဓိကထား အာရုံစိုက်သည်။ ဟောင်ကောင်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး အိုင်ဗန်သည် ဟောင်ကောင်၊ ရန်ကုန်နှင့် ယူကေတို့တွင် ကြီးပြင်းခဲ့သည်၊၊ Cranleigh ကျောင်း၊ Hertford ကောလိပ်နှင့် အောက်စဖို့ ဒတက္ကသိုလ်တို့တွင် ပညာသင်ကြား ခဲ့သည်။ နယူးယောက်နှင့် ပေကျင်းမြို့တွင် အသက် ၂၀ ကျော်ကတည်းက အလုပ်လုပ်ပြီးနောက် အိုင်ဗင်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်သို့ ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့သည်။ အိုင်ဗင်သည် သူ၏ဒေသန္တရ အကျိုးအမြတ်မယူသော TS1 မှ အနုပညာကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ထောက်ခံသူဖြစ်ပြီး နယူးယောက်အခြေစိုက် PERFORMA နှင့်ဟောင်ကောင် ဒီဇိုင်း Trust ၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်။
Ivan is the founder of Pun + Projects,afirm focussed on creating innovative lifestyle and cultural projects in Yangon. Born in Hong Kong, Ivan was raised between Hong Kong, Yangon and the UK, where he was educated at Cranleigh School and Hertford College, University of Oxford. After working in New York and Beijing in his early 20s, Ivan relocated to Yangon in 2011. Ivan isapassionate supporter of the Arts through his local non-profit initiative TS1 and he sits on the Boards of both New York-based PERFORMA and The Hong Kong Design Trust
ဝီလျံသည် ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အကြံပေးအဖွဲ့ OSG ၏ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ OSG သည်နယ်စပ်၊ ပေါ်ထွက်လာသောနှင့် ပိပက္ခခလွန် စီးပွားရေးတို့တွင် စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးအမြတ်အတွက် မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ တည်ထောင်ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးခြင်းတွင် အထူးပြုသည်။ OSG သည်အာဖရိက၊ အာရှ၊ ကာရေဘီယံ၊ ဥရောပ၊ CIS၊ လက်တင်အမေရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်တွင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသောကုမ္ပဏီများနှင့်ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ OSG သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၌ပထမဆုံးတည်ထောင်ခဲ့ပြီး William သည်ရန်ကုန်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့သည်။
William isaDirector of management & advisory group OSG, which he founded in 1987. OSG specialises in establishing and developing commercial businesses and not-for-profit organisations in frontier, emerging and post-conflict economies. OSG has created and assisted companies and charities operating in over forty developing countries in Africa, Asia, the Caribbean, Europe/CIS, Latin America and the Middle East. OSG first establishedapresence in Myanmar in 1995 and William lived in Yangon for several years.
OSG သည် MABA ၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဌာနကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
OSG သည်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အကြံပေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးထွန်းသစ်စစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင်အထူးပြုသည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှစ၍ OSG ကုမ္ပဏီများသည်အာရှ၊ အာဖရိက၊ ကာရစ်ဘီယံ၊ ဗဟိုနှင့်အရှေ့ဥရောပ / CIS၊ လက်တင်အမေရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိနိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်မှကဏ္managementများစွာတွင်လက်ရှိစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အကြံပေးစွမ်းရည်များတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ OSG တွင် MABA အပါအ ၀ င်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းများစွာကိုကူညီပံ့ပိုးရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသော Corporate Social Responsibility programme ရှိသည်။ OSG သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၌စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး OSG ဒါရိုက်တာ William Oswald သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့သည်။ ဝီလျံသည် MABA ၏ကော်မတီဝင်ဖြစ်ပြီး OSG သည် MABA ၏အတွင်းရေးမှူးရုံးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
OSG provides MABA’s Secretariat.
OSG isabusiness management & advisory group, specialising in emerging and frontier economies. Since 1987 OSG companies have been involved in hands-on management and advisory capacities inawide range of sectors in over forty countries in Asia, Africa, the Caribbean, Central & Eastern Europe/CIS, Latin America and the Middle East. OSG hasavaried Corporate Social Responsibility programme helping to supportanumber of not-for-profit organisations, including MABA. OSG first establishedapresence in Myanmar in 1995 and OSG Director William Oswald lived in Myanmar for several years. William isaCommittee Member of MABA.
ဒီဇိုင်း နှင့်အိုင်စီတီနယ်ပယ်များတွင် ပရိုဂရမ်ထောက်ပံ့ပေးသည့် Strength Value ၏ အကူအညီများကို မြန်မာဗြိတိန်အသင်းကြီးမှ (MABA) မှကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Strength Value သည် မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် နည်းပညာ၀န်ဆောင်မှုပေးသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ ဟိုတယ်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဖြေရှင်းနည်းများ၊ ကျောင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဖြေရှင်းနည်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှု ဖြေရှင်းနည်းများနှင့် အိုင်စီတီအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ အပါအ၀င် စီးပွားရေးနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအတွက် ဒီဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးပါသည်။
MABA is grateful to have benefited from the kind help of Strength Value, provided pro bono, in the areas of design and ICT. Strength Value isaMyanmar-based technology services company. It delivers digital services and solutions for businesses and individuals, including property management solutions, school management solutions, fleet management solutions and ICT consulting services.
ဗြိတိသျှ ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းသည် ဆက်သွယ်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အကျိုးစီးပွား နှင့်အတူ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများသို့ သတင်းပေးပို့ခြင်းနှင့် ထပ်ဆင့် ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးသည်။ ၎င်း၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ နှင့်အတူ ဗြိတိသျှ ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ABE အပါအ၀င် အကျိုးအမြတ် မယူသော ဗြိတိသျှ စီးပွားရေး နှင့်အပညာရေးပံ့ပိုးပေးသော အဖွဲ့အစည်းများစွာအား ကူညီသည်။ (အသေးစိတ်အတွက် ‘What’s On’ စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ)
The British Chamber of Commerce Myanmar providesaproactive and professional approach to facilitating access and connections, informing and delivering value-add services to businesses with interests in Myanmar. Alongside its commercial activities, The British Chamber of Commerce provides assistance toanumber of British not-for-profit organisations working in Myanmar, including but not limited to business education provider ABE (see ‘What’s On’ page for more details).